Obodo atọ ị gara Prague | Akụkọ Njem
Obodo atọ ileta Prague
Mariela Carril | | Prague, Ihe ị ga-ahụ
Czech Republic Ọ nwere akụkọ ihe mere eme nke narị afọ gara aga na nke ahụ na-eme ya nnukwu ebe njem nleta maka ndị hụrụ akụkọ ihe mere eme, nka na ọdịbendị n'anya. Nke mbụ Bohemia ghọrọ akụ nke ndị Habsburgs dị ike ma site n'aka ndị Soviet ndị Soviet jikọtara Czechoslovakia ruo 1993 mgbe ọ mechara nweta nnwere onwe ya.
Ọ bụ mgbe ahụ, laa azụ na 90s, mgbe njem malitere iji ike karịa Prague ka Iron Curtain amalitela nchara ruo mgbe ebighị ebi. Ihe ebube Czech mara ọtụtụ mmadụ mma na ịchọtakwa akụkụ nke ụwa a bụ n'oge ahụ njem kacha mma n'ụwa. Ma Ọ bụghị naanị Prague bụ ebe a ga-eleta ma ọ bụrụ na ị nọ n'isi obodo enwere obodo atọ ndị ọzọ ileta: Pilsen, Ceské Budejovice na Frantiskovy Lázne.
1 Nleta Pilsen si Prague
2 Gaa Leta Frantiskovy Lázne si Prague
3 Ceské Budejovice njem si Prague
Nleta Pilsen si Prague
Pilsen ma ọ bụ Plzen bụ Isi Obodo Omenala nke Europe n'afọ gara aga na ee, aha nwere njikọ na ụdị biya Kelechi na anyị niile maara. Omenala nke ime biya bidoro na narị afọ nke XNUMX mgbe a hapụrụ ndị obodo ime biya biya n'ụlọ.
Ọ bụ obodo nke anọ kachasị na mba ahụ, dị n’ebe ọdịda anyanwụ nke Bohemia e hiwere ya na njikọta nke osimiri anọ site n'aka King Wenceslas II na 1295. N'ihi ọnọdụ ya ọ bụ ngwa ngwa obodo dị mkpa, yana ọkwa akụ na ụba na ọdịbendị dị oke mkpa. E nwere ụlọ nke Gothic, Renaissance, Baroque na ọtụtụ narị afọ nke XNUMX ije. Mgbe emepụtara biya ghọrọ n'ezie mkpa ụlọ ọrụ e guzobere na-arụ ọrụ taa.
Pilsen ọ dị ihe dị ka kilomita iri itoolu site na Prague na i nwere ike iru ebe ụgbọ oloko. Gbọ oloko na-apụ oge ọ bụla site na isi obodo. N'aka nke ya, Pilsen nwere usoro ihe eji eme njem, IDP, nke na-enye gị ohere iji otu tiketi iji kwaga usoro ihe niile. Enwere "mpaghara" dị iche iche na ọnụ ahịa nke tiketi ahụ dabere na mpaghara ị na-agabiga. Dị ka onye njem nleta ihe kachasị mma bụ ịgbazite igwe kwụ otu ebe.
Ozugbo ahụ a jee ije site na obodo ochie ọ bụ iwu, ime ihe Njegharị nke Pilsner Urquell Distillery, pụọ na mmanya doro anya, mara nke Katidral Pilsen, agolọ Nzukọ na ihe ngosi ihe mgbe ochie na ezi ihu igwe ị ga-enwe oke ohia na osimiri nke obodo nwere gburugburu ya.
Ị chọrọ saa ara na mo nso? Nwere ike ime nke a na Purkmistr Distillery, ụlọ ọrụ na-enye ọrụ spa na ịhịa aka nke biya. Ebe a na-asa bea na-eri euro 27 ma ha bụ maka otu ndị ruru mmadụ iri na isii. Debanyere aha?
Gaa Leta Frantiskovy Lázne si Prague
Obodo a bụ a spa ma ọ bụ obodo -spa nke dị nso na ókèala Germany, dị nnọọ awa abụọ ụgbọ okporo ígwè si Prague. Ọ bụ obere obodo karịa Pilsen mana mara mma ma bụrụ ebe izu ike ruo ọtụtụ narị afọ.
O nwere ụfọdụ iyi na-ekpo ọkụ nke mmiri ya jupụtara na mineral ma a mara ha kemgbe narị afọ nke 24. Ya mere, na ngwụcha narị afọ nke XNUMX, e hiwere obodo ahụ n'okpuru aha Kaiser Franzensdorf ma ọ bụ Franzensbad wee bụrụ onye ama ama n'etiti ndị ama ama. N'ihe kachasị mma enwere mmiri ọkụ XNUMX na-arụ ọrụ, ọ bụ ezie na taa ntakịrị pere mpe. Ọ bụ ebe Goethe n'onwe ya hụrụ n'anya nke ukwuu, nke mere na o kwuru na ọ bụ "eluigwe n'elu ụwa", site na Johann Strauss, Kafka na Beethoven, n'etiti ndị ọzọ.
Ọ bụ ụlọ mara mma nke nwere ụkpụrụ ụlọ, nke nwere ọtụtụ ụlọ neoclassical, ogige ndị mara mma, na ụlọ esere ese. Ọ bụrụ na ị nwere oge, ndụmọdụ m bụ ka ị gaa njem kilomita ise ọzọ, ọ nweghị ihe ọ bụla, ma bịarukwuo nso mata Cheb, obodo mara mma ọzọ ebe ulo nile ji osisi. Okirikiri ala ugwu gbara gburugburu na-agba gburugburu gbara ya gburugburu, wee tinye ya na ebe nchekwa eke ebe ugwu apịtị na-agbọpụta dị ka ihe ncheta nke ọrụ mgbawa na-adịbu.
A na-akpọ ebe ahụ Soos na enwere moors nwere ọdọ mmiri na mmiri nwere carbon dioxide na mineral gas. Ezigbo ọdịda ala nke usoro mmụta mmụta kpuchitere nke na-eduga gị n'ụzọ zuru ezu na apiti mmiri na nyiwe osisi dị warara. Visit gara n’ogige ebe a na-edebe ihe ochie ma nwee ebe ndebe ihe mgbe ochie na-akọ akụkọ ihe mere eme nke ụwa na Nature yana ụdị anụmanụ ndị prehistoric buru ibu.
El spa Frantiskovy Lazne Ọ bụ ebe ịkwanye onwe gị nwa oge: mmiri oyi 20, na gas na-agwọ ọrịa na peat nkịtị. Ha na-ekwu na ha dị mma maka nsogbu ụmụ nwanyị, ike, ọnọdụ obi na nsogbu locomotor. Seehụ bụ ikwere, mana ichọtọ onwe gị nwa oge anaghị afụ ụfụ. Ma ọ bụrụ na ị na-eso ụmụ gị ma ọ bụ n'oge ọkọchị ị nwere ike ịga leta Akwarium: ezinụlọ gafere maka ndị okenye abụọ na ụmụaka abụọ na-efu naanị euro 18. Ahịa!
Ceské Budejovice njem si Prague
Ọ bụ n’ebe ndịda Bohemia ma ọ bu obodo di mkpa na mpaghara. Ọ bụ Eze Ottokar II hibere ya na ndị mbupụtara ya mbụ sitere na Upper Austria, si n'oké ọhịa Bohemian. Ọ bụ ezie na n’oge gara aga, e nwere ọtụtụ ndị German bi, dị ka n’obodo abụọ ndị ọzọ m kpọrọ aha n’elu, ihe gbanwere n’ụzọ dị ukwuu mgbe Agha nke Abụọ gasịrị ma taa ha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị Czech niile.
Ceské Budejovice kwa ọ bụ obodo na-ebi na biya. Emegharịala ya kemgbe narị afọ nke iri na atọ ma bụrụkwa nke distallery nke Emperor Roman Holy. Ọ bụ onye kere ya nwaoke nke mbụ, nke akara ndị America malitere site na ị copomi, yabụ ịnwale ya na ụlọ mmanya ma ọ bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ bụ ọrụ anyị dị ka ndị ọbịa. Budvar Distillery na-enye njem nlegharị anya dị mma nke na-eri euro 4 ma ị nwere ike ịgagharị obere ụlọ ngosi ihe nka nwere ihe nkiri na ihe ngosi pụrụ iche.
Obodo nwere ọtụtụ ụlọ akụkọ ihe mere eme nke ụdị dị iche iche, baroque, mmụgharị, gothic. Halllọ Nzukọ Obodo na ihe mkpuchi ọla ya, Dominican Convent na chọọchị nke narị afọ nke XNUMX, nnukwu ebe etiti ahụ, Belle Époque style ụgbọ okporo ígwè, Chineke, mkpọmkpọ ebe nke Jan Zizka Castle, ndị Castlọ Hluboká, na mpụga, na Towerlọ elu ojii site na narị afọ nke XNUMX, dịka ọmụmaatụ, so n'ime isi ebe nkiri ya.
Gbọ oloko na-ejikọ Prague na Ceské Budejovice kwa awa, njem ahụ na-ewe awa abụọ na ọkara ma na-efu euro 6 maka okenye. Dịka ị pụrụ ịhụ, Prague bụ naanị ọnụ ụzọ ámá mba nke ebe mara mma ma ebe a ị nwere nhọrọ atọ na-abịa ndụ na agba n'oge ọkọchị. Ha na-eche gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Prague » Obodo atọ ileta Prague
Akụkọ banyere Morro de San Juan na Puerto Rico
Routezọ iji chọpụta akụ violet nke Provence